IPirates engcupheni yokushiywa nguMhango | Ilanga News
Home Ezemidlalo IPirates engcupheni yokushiywa nguMhango
Bayayivuma eyokuthintwa ngamakilabhu aphesheya
ANGASE ayifulathele i-Orlando Pirates uGabadinho Mhango ofunwa ngamakilabhu aphesheya. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
ISENGCUPHENI yokulahlekelwa yisibabuli somgadli i-Orlando Pirates njengoba kuvela ukuthi zingena zingenile izicelo ezivela emakilabhini ase-Europe amfunayo.
UGabadinho Mhango ongumgadli weBucs uzenzele igama ngesizini esanda kusongwa njengoba ebengomunye wabadlali beZimnyama abebengayibheki inethi.
Uvalele amagoli awu-16 ngokuhlanganyela noPeter Shalulile we-Highlands Park okwenze bahamba phambili ngokuhlohla amagoli.
Leli phephandaba lithole ukuthi lo mdlali usephenduke inyama emakilabhini ase-Europe. Kuthiwa zingena zingenile izicelo kumphathi wakhe uMike Makaab weProsport International okuyinkampani ephethe izindaba zalo mdlali.
“IPirates kungenzeka ilahlekelwe nguMhango ngoba kunamakilabhu amfunayo phesheya. Naye vele kuyisifiso sakhe ukuyodlala phesheya ngoba uzibona esehlale isikhathi eside kuleli.
“Kodwa-ke ukuhamba kwakhe kuncike ekutheni iPirates iyavuma yini ngoba phela usanenkontileka nayo,” kusho umthombo waleli phephandaba oncikene nalo mdlali.
UMakaab eshayelwa yileli phephandaba ngalolu daba, uthe: “Engingakusho wukuthi akhona amakilabhu aphesheya asithintile kodwa kayikho eza nento eqondile, ebhalwe phansi. UMhango ube nesizini enhle, besikulindele vele ukuthi kukhona amakilabhu azomfuna.
“Nokho ngokwebhola ngisho angaqhamuka abe mangaki amakilabhu amfunayo uma ingekho eza nento ebhalwe phansi leyo yinto ifana nengekho. Njengamanje kakukho okuqondile okusaqhamukile, sizolinda sibone ngokuhamba kwezinsuku.”
Previous articleIphoyisa liqothe ngenhlamvu umndeni wakwabo
Next articleUkhethe ukuzilengisa ‘ehalela’ ingoduso yomuntu